Tronsmart T6 Plus Enwekwukwa Edition Review | Gam akporosis
Tronsmart T6 Plus Enwekwukwa Edition Review
Igwe okwu Bluetooth a na-ebugharị ebugharị bụ "ga - enwerịrị" maka ndị na-enwe mmasị ịnụ ụtọ egwu kachasị amasị ha na njem. N'oge a, site n'aka Ihe omumu anyị na-eweta ọkà okwu T6 gbakwunye agbakwunyere. Ihe na-adọrọ mmasị nke ukwuu na ngwaahịa na-enye anyị mma, ike na ezigbo ọnụahịa.
Anyị nwere ike mechaa pụọ osimiri, ugwu ma obu ogige. Iku ume n'èzí bụ ihe anyị na-atụghị anya ya n'oge mkpọrọ. Ma ugbu a na anyị nwere ike, gịnị ohere kacha mma iji nweta ọkà okwu dị ike ma dị mfe inwe ike ịnụ ụtọ egwu kachasị amasị anyị ebe ọ bụla anyị na-aga.
1 Tronsmart T6 Plus, egwu gị na-aga ebe ị na-aga
2 Ekwenye na nhazi
3 "TOP" teknụzụ maka Tronsmart T6 Plus
4 Njikọ zuru ezu maka T6 Plus Enhanced Edition
6 Uru na ọghọm nke Tronsmart T6 Plus Edition Enhanced
Tronsmart T6 Plus, egwu gị na-aga ebe ị na-aga
Otu n'ime uru anyị na-eleba anya na ya Mgbe ị na-achọ igwe okwu bluetooth bụ na enwere ike ibugharị ya. Na anyị nwere ike iji ya n'ime ụlọ ọ bụla n'ime ụlọ anyị, ma n'otu oge ahụ anyị nwere ike iburu ya na njem ọ bụla ebe anyị chọrọ. Enwere ọtụtụ ndị ọkà okwu anyị nwere ike ịchọta taa na ahịa. Ma ọ bụghị ha niile nwere ike ịnye ogo na ike nke Tronsmart T6 Plus. Ugbua can nwere ike ịzụta Tronsmart T6 Plus Enhanced Edition na Amazon na ọnụahịa kacha mma.
Anyị anaghị eche ọkà okwu ihu na anyị nwere ike iwere obere.. Na ọdịdị ọ bụ, ma ọ bụ na-erughị, dị ka a liter na ọkara kalama mmiri, ọ bụ ezie na dịtụ thicker na-erughị elu. Mana n'ezie anyị ga-ahụ oghere n'ime akpa ma ọ bụ akpa akpa ọ bụla ka egwu anyị wee soro anyị mgbe niile.
Na a usoro ihe osise na-enye ụda olu 360-gburugburu, Tronsmart T6 Plus Enhanced Edition na-ekwe nkwa ụda dị mma ma n'ime ma n'èzí. Anyị nwere batrị zuru ezu ịbụ ruo awa 15 na-ekpori ndetuta ọkpụkpọ anyị. Na ha 40W ike, anyị na-ekwe nkwa na àgwà na doo anya nke music na olu zuru.
Ekwenye na nhazi
Ọ bụghị ọkà okwu mbụ anyị nyochara nwere usoro a kwụ ọtọ. Ọtụtụ ụlọ ọrụ ahọrọla usoro a na nke a bụ ihe na-egosi na ọ na-arụ ọrụ. Tronsmart enweworị ụdị dị iche iche anyị nwere ike itinye ma kwụpụta ma kwụ ọtọ. Ntinye aka na-aga n'ihu na atụmatụ a bụ ihe akaebe nke ihe ịga nke ọma ya.
The Tronsmart T6 Plus bụ ihe emelitere version nke a ọma Starter ngwaahịa, nke kemgbe ihe ịga nke ọma site na mmalite. Ugbu a, idebe isi nke ụdị nke mbụ ya, mma site n'ịgbakwunye ọrụ ọhụrụ. Ọhụrụ mputa imewe na Mat nwa agba na-enye ndị ọzọ mara na ihe eji eme ya n’enye mma.
El imewe cylindrical Ọ zuru oke na-ejikọ usoro siri ike nke ntupu na onyonyo ọkachamara. Ọ dị ezigbo mma ijide aka na otu bọtịnụ mmetụ mma na anyị na-ahụ n'ụzọ kwụ ọtọ n'otu akụkụ, a na-eche ha na njikwa dị ezigbo mma.
N'okpuru bọtịnụ anyị na-achọta a oghere na-anọgide na-ezo jiri roba taabụ nke anyị ga-ewepụ obere nsogbu. Jiri otu gụọ 3.5mm mini Jack inyeaka ọdụ ụgbọ mmiri, oghere maka Micro SD kaadị ebe nchekwa, nke USB Type-C usoro odori n'ọdụ ụgbọ mmiri, na a Ọdụ ụgbọ mmiri USB nke anyị nwere ike ịgba ụgwọ ngwaọrụ anyị.
Nweta Tronsmart T6 Plus Enwelitere Edition si Amazon
Na elu bụ pụtara ìhè multifunction swivel wheel nke bu onye mbu nke onye okwu T6 Plus. Anyị nwere ike igbu ruo iwu asaa dị iche iche ya na ya. Pịa ka kwụlo ma ọ bụ kpọọ oku. Otu pịa ka kwụsị ma ọ bụ kpọọ egwu ahụ. Pịa ogologo rụọ ọrụ olu enyemaka. Ma ọ bụ gbanwee aka ekpe ma ọ bụ aka nri maka njikwa nchịkwa olu.
"TOP" teknụzụ maka Tronsmart T6 Plus
Versiondị ọhụrụ nke Tronsmart T6, dịka anyị kwurula, nwere mmụba dị ukwuu karịa nke gara aga. Isi ha niile bu a pụrụ isi chọta gị abụọ dị ike ọkà okwu ekwesị otu n'elu ndị ọzọ. Na-atụ aka ma n'akụkụ ụzọ. Nke a na-eme ka anyị nweta a ezigbo ụda 360 stereo nke ahụ ruru n'ike nke elu 40 W (2 x 20W).
Ike nke mepụtara Tronsmart T6 Plus na-eme bass na ada ụda, na àgwà nke ụda doro anya ma ghara ịma jijiji. Abụọ maka ịkpọ oku na ịkpọ egwu, ọdịyo dị ezigbo mma. Ahụmahụ ike na-adọta anya n'ime ụlọ yana n'èzí. Ọ bụrụ na ị na-achọ ike na ịdị mma na ọnụahịa dị mma, nke a bụ ọkà okwu ịchọrọ, zụta ya ugbu a na Amazon
Akụkụ ndị ọzọ anyị lere anya mgbe anyị na-achọ ezigbo ọkà okwu a na-ebugharị, na mgbakwunye na ike na ogo dị mma, dị ikike nke o nwere ike inye anyị. Tronsmart T6 gbakwunyere atụmatụ a batrị abụọ na ngụkọta nke 6,600 mAh itinye. Batrị na mgbakwunye na-ekwe nkwa ruo 15 consecutive ugboro nke playback, ha ga-ejere anyị ozi dị ka ike ụlọ akụ iji na-akwụ ụgwọ ihe ọ bụla na ngwaọrụ ndị ọzọ si ya USB n'ọdụ ụgbọ mmiri.
Njikọ zuru ezu maka T6 Plus Enhanced Edition
Ihe mere ọkà okwu a ji pụọ iche bụ etu o nwere ike isi nye anyị njikọ. Anyị nwere njikọ bluetooth nke onye ọ bụla na - enwekarị, na nke a Bluetooth 5.0, nke na-ekwe nkwa njikọ kwụsiri ike na-enweghị nkwụsị ma ọ bụ ndabichi. Na mgbakwunye, anyị na-achọta ọtụtụ ohere njikọ. Anyị nwere 3,5mm mini Jack inyeaka ọdụ ụgbọ mmiri, oghere ebe nchekwa Micro SD, na nke kacha mma, NFC njikọta ngwa ngwa ngwa ngwa na ngwaọrụ ọ bụla dakọtara.
Ihe mgbakwunye iji gosipụta, ọkachasị ebe ọ bụ ihe anyị na-ahụghị na ndị ọzọ na-ekwu okwu, bụ enwere ike ịha nha. Anyị nwere ruo 3 dị iche iche audio ụdịdị ka anyị nwee ike ịhazigharị ya na ụdị egwu anyị chọrọ ige ntị oge niile. Ọ bụrụ na ọ dị gị ka obere ihe, ọkà okwu a nwekwara IPX6 uzuzu uzuzu na mmiri na-eguzogide ya.
Nlereanya T6 gbakwunye agbakwunyere
Bịa Ihe ruru mita iri abụọ
Onwe ya Ruo awa 15
Oge zuru ụgwọ 3 - 5 awa
Batrị 6600 mAh
Ogologo oge 20 Hz - 16000 Hz
Ndị na-ekwu okwu 2
Akụkụ X x 27.5 12.5 9.6 cm
Ibu ibu 1.08 kg
Ahịa 69.99 €
Linkzụta njikọ Tronsmart T6 gbakwunyere Mgbakwunye
Uru na ọghọm nke Tronsmart T6 Plus Edition Enhanced
La Ike ụda na ihe doro anya nke ihe niile anyị chọrọ mụta nwa nwere nkọ nke na ọ bụghị mmadụ niile nwere ike inweta.
Na-adabere mapụtara batrị ọbụna ịkwụ ụgwọ ngwaọrụ ndị ọzọ na-amụba ọrụ ya.
Ezi ụda nke ogo 360 ekele ntinye nke ndị na-ekwu ya na usoro ya kwụ ọtọ.
6.600 mAh batrị
360 ogo ụda
Onye kwuru okwu nwere arọ dị arọN'agbanyeghị na ọ bụ obere ngwaọrụ, anyị na-ahụ 1,08 n'arọ.
La mkpuchi roba n'azụ nke ọdụ ụgbọ mmiri na-ezo na oghere kaadị ebe nchekwa bụ siri ike ibuli.
Ihe nkpuchi siri ike
Tronsmart T6 gbakwunyere Mgbakwunye
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nyocha » Tronsmart T6 Plus Enwekwukwa Edition Review
Anyị nwalere vidiyo Telegram ọhụrụ na nchịkọta akụkọ foto